सडक दुर्घटनामा प्रेमीको ज्यान गएपछि एक्लिएर प्रेमीले भने ‘तिम्रो लागि रातो साडी किनेर ल्याइदिएको छु बुडी, तिमि कहाँ गयौ’ ? — SuchanaKendra.Com
सडक दुर्घटनामा प्रेमीको ज्यान गएपछि एक्लिएर प्रेमीले भने ‘तिम्रो लागि रातो साडी किनेर ल्याइदिएको छु बुडी, तिमि कहाँ गयौ’ ?
काठमाडौं, । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका १ गुरुखोला घर भएकी रमिता पाँच दिन पछि हुने आफ्नो विवाहको तयारीमा आफै लागेकी थिइन् । डेढ वर्ष अघि आफ्ना प्रेमीसंगै बस्दै आएकी रमितालाई माइतीले उनको विवाह स्वीकार गरेका थिएनन् । तर अहिले माइतीलाई पनि मनाएर धुमधामका साथ माघ १३ गते विवाह गर्ने निधो भएको थियो ।